Iinqaba Ziyathengiswa | May 2022
Yila Indawo Yam
Ezona Khitshi Zihle Zango-2017
Iingcamango Zehalloween Ezintle
IBakala I kuDweliso lwenza iNqaba yokuThengisa eWiltshire
Izindlu ezithengiswayo eWiltshire: Ibanga elikhulu kunye nembali yeBakala I ndidwelise inqaba emaphethelweni edolophu entle yemarike yaseDevize, eWiltshire, ngoku iyathengiswa.
I-5 eNqabileyo kunye nokuQinisa iiCastles ziyathengiswa ngoku
Ukuba ukhe walangazelela ukubuyisela inqaba, okanye uhlala kwenye ebuyiselwe ngokupheleleyo, khangela oku kukhethwa kweenqaba kwintengiso (nakwichateau).
Inqaba yokulala eyi-32 kwinqaba yaseScotland iyathengiswa - Iinqaba ziyathengiswa eScotland
Indawo enembali yenqaba, ebekwe kwiindawo eziphakamileyo zaseScotland, isandula ukufika emarikeni kwaye inikezela ngamagumbi okulala angama-32, iihektare ezingama-30 zamabala, izindlu ezincinci kunye nengxelo enkulu yendlu yomthi yaseYurophu.
Abantu abangama-6 500 bathenga inqaba ye-13th Century eFrance-Mothe-Chandeniers chateau
I-Mothe-Chandeniers chateau eLes Trois-Moutiers, kumbindi ntshona yeFrance, ikwimfuno engathethekiyo yokubuyiselwa.
Igumbi lokulala le-16 Inqaba yaseScotland iyathengiswa kunye neIqithi ezimbini ezingenabemi - Inqaba yaseScotland iyathengiswa
Ukuthandana ukusukela ngo-1902, i-Glenborrodale castle yindlu enemigangatho emihlanu yeScots Baronial okwangoku iyathengiswa-kwaye iza neziqithi ezibini. Ime kunxweme olusemazantsi e-Ardnamurchan Peninsula e-Highland eScotland.
I-14th Century Castle iyathengiswa eFife, eScotland-eFernie castle
Inqaba enkulu enegumbi lokulala elinamagumbi angama-20 embindini weFife, eScotland, ithengiswa nge- $ 1.5 yezigidi. Thatha uhambo malunga neFernie Castle.
'Haunted' Inqaba yaseScotland iyathengiswa eSt Andrews -Iinqaba ezithengiswayo eScotland
I-Earlshall castle eSt Andrews, Fife, ngokuqinisekileyo ikunika indawo yokuhlala enamagumbi asibhozo okwamkela, amagumbi okulala alishumi, izindlu ezintathu ezahlukileyo kunye neehektare ezingama-34 zomhlaba.
Inqaba yaseHampshire yaseWarblington iyathengiswa-Inqaba yangaphambili ye-Earl yaseWarwick iyathengiswa
Ekuqaleni yayakhiwe phakathi kwinkulungwane ye-14, iWarblington castle yindlu enamagumbi asixhenxe adwelisiweyo ayathengiswa eHampshire, eyayikade ingumnini we-Earl yaseWarwick.
Imibala egxininisayo eluhlaza okwesibhakabhaka
iholide kwi-cuba 2016
imibala yepeyinti egumbini lokuphumla